Voasambotry ny Polisy misahana ny fizahan-tany ao Myanmar fa voarohirohy ho mpampihorohoro an'i Sri Lanka
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Voasambotry ny Polisy misahana ny fizahan-tany ao Myanmar fa voarohirohy ho mpampihorohoro an'i Sri Lanka
Polisy mpizahatany ao Myanmar no nisambotra lehilahy sankana iray ny alakamisy tolakandro. Ilay mpizahatany avy any Sri Lanka dia voarohirohy ho nifandray tamin'ireo voarohirohy tamin'ny fanapoahana baomba ny paska tany Sri Lanka izay namono olona 250 farafaharatsiny /
Abdul Salam Irshad Mohmood, 39 taona, dia nosamborin'ny polisy rehefa niseho tao amin'ny biraon'ny fifindra-monina tao afovoan-tanàna Yangon hanavao ny visa maha-mpizahatany azy. Ny fisamborana dia nitranga taorian'ny fangatahan'ny polisy mpizahatany ao Myanmar tamin'ny Alarobia tany amin'ny Sampan-draharahan'ny Hotel sy fizahan-tany ao an-toerana mba hitatitra raha nisoratra anarana tany amin'ny hotely na trano fandraisam-bahiny tao amin'ny firenena izy. Any Myanmar, ny hotely sy trano fandraisam-bahiny dia miasa amin'ny alàlan'ny fahazoan-dàlana eken'ny departemanta.
Araka ny taratasy nalefan'ny departemanta tany amin'ny trano fandraisam-bahiny sy trano fandraisam-bahiny, dia tonga tao Yangon ilay voarohirohy, teratany sankilanis, tamin'ny visa visa iray tamin'ny volana janoary 2018. manome ny laharana pasipaorony koa ny daty nahaterahany.
Abdul Salam Irshad Mohmood dia nijanona nandritra ny herintaona sy roa volana. Tsy mazava raha namono ny governemanta Myanmar ny manam-pahefana Sri Lankan tamin'ny fampahalalana fa any Myanmar ny voarohirohy.
Taorian'ny fipoahana baomba ny alahady paska dia nilaza ny manampahefana srilkaney fa ny olona ahiahiana ho nanao teti-dratsy rehetra ary ireo izay mifandray mivantana amin'ny fanafihana dia efa voasambotra na maty. Nilaza izy ireo fa ny fanapoahana baomba dia nino fa nataon'ny vondrona Islamista roa tsy dia fantatra, ny National Tawheed Jamaath (NTJ) sy Jamathei Millathu Ibrahim (JMI). Ny fanjakana Islamika dia nilaza fa tompon'antoka tamin'ireny fanafihana ireny.
Botswana dia miteny hoe eny indray amin'ny Elephant Hunting